I-CBD yokuphelisa iintlungu | Eyona CBD ilungileyo ngo-2021
Iziphumo ebezingalindelekanga ezinokubakho ze-CBD zokuphelisa iintlungu
I-Cbd, imfutshane nge-cannabidiol, ihamba ngokudlulela ekuqwalaselweni njenge- "it" isongezelelo esitsha, esinokunyanga iimeko ezahlukeneyo zempilo, ezibandakanya, unxunguphalo, iintlungu, kunye nokungalali, ukudwelisa nje ezimbalwa. Itholakala ngeendlela ezininzi, ukusuka Izithambiso ze-CBD neeoyile zokutya kunye neziselo ezifakwe kwi-CBD. Kodwa ngaba iyasebenza ngokwenene?
I-Cbd yenye yeekhompawundi kwizityalo zeCannabis Sativa. Intsangu ivela kwi-Cannabis Sativa nayo, kodwa i-CBD ayinazo izixhobo zengqondo ze-tetrahydrocannabinol (THC), elicandelo elisebenzayo kwentsangu. Zombini iikhompawundi zinempembelelo kwinkqubo ye-endocannabinoid esinayo emzimbeni wethu. Le nkqubo inoxanduva lokuqhubekeka neentlungu, ukutya, kunye nenkumbulo, phakathi kwabanye.
Nangona kungekho bungqina bokwenyani beziphumo ze-CBD emzimbeni, ikakhulu ngenxa yendawo engwevu esemthethweni apho i-CBD ibikho kangangexesha elide, kukho ubungqina bokuba kwinqanaba lokunyanga ungasebenzisa i-CBD yokuphelisa iintlungu.
Ngelixa kungekho lwazi loluntu kuvavanyo lweklinikhi ekusetyenzisweni kwe CBD Ukunciphisa iintlungu, uninzi lwezifundo lubonakalisile ukuba i-CBD inokunciphisa iintlungu kunye nokudumba, ngoncedo oluneziphumo ebezingalindelekanga ezimbalwa. Ngaphandle koko, abantu baxele ukuba i-CBD iyaluphelisa unxunguphalo nokungalali, iimeko ezihlala zixhunyaniswa nentlungu engapheliyo. Ngokumiselwa ngokusemthethweni kwe-hemp evela kwi-hemp kumazwe amaninzi (engenayo i-THC), abantu abaninzi baye babuyela kwi-CBD njengenye indlela yokunciphisa iintlungu.
Kunconywa ukuba abantu abaneengxaki ezingapheliyo bathethe noogqirha malunga nokuthatha CBD njengenye indlela. Nangona kunjalo, kukho ingcebiso kubantu abafuna ukuzama i-CBD ngeentlungu:
Ukutshaya ayisiyondlela ilungileyo: Ukutshaya kungonakalisa imiphunga, ngaphandle, ayisiyondlela ikhawulezayo yokufumana isiqabu.
Indlela yolawulo ibalulekile: I-CBD kungcono ukuba ithathwe kwi-tincture ukufumana isiphumo esikhawulezayo, okanye kwipilisi okanye iipilisi zejeli ezithambileyo, ukukhutshwa kancinci, nangakumbi.
Thenga kubasasazi abaziwayo. Njengeevithamini kunye nezinye izongezo, i-CBD ayilawulwa yi-FDA, ke kungcono ukuyifumana kwinkampani enodumo, njenge-Red Emperor CBD, eneemveliso zomntu wesithathu ezivavanyiweyo ezikumgangatho ophezulu.
Kungcono uqale ngomthamo ophantsi. Emva koko, yonyuse kancinci, de ufumane ukukhululeka okukhulu kwiimpawu zakho. Landa umkhondo weempawu zakho ukuze ubone ukuba ngaba i-CBD iluncedo kuwe njengesixhobo sokuthomalalisa iintlungu.
Olunye uphononongo lwezonyango lubonakalisile ukuba nokuba ioyile ye-CBD yindawo ekhuselekileyo ngokubanzi yemvelaphi yendalo, ioyile ye-CBD inokuvelisa iziphumo ebezingalindelekanga. Ukuhamba rhoqo kunye nokuba qatha kwezi mpawu kunokwahluka komnye umntu. Iziphumo eziqhelekileyo ezichaphazelekayo zingabandakanya:
Utshintsho kumdla wokutya
Imilomo yomlomo owomileyo
Ioyile ye-CBD inokunyusa ii-enzyme zesibindi, ezingumqondiso wokudumba kwesibindi. Abantu abaneemeko zesibindi banokusebenzisa i-CBD, kodwa kufuneka basebenzise ioyile ye-CBD ngononophelo olugqithisileyo, ngokufanelekileyo phantsi konyango lukagqirha onokuthi enze uvavanyo rhoqo kumanqanaba e-enzyme yegazi.
Ioyile ye-CBD kufuneka ithintelwe ngokupheleleyo ngexesha lokukhulelwa kunye nokuncancisa. Ngo-2018 isifundo eqhutywa yiAmerican Academy of Pediatrics ilumkise abasetyhini ukuba baphephe intsangu kunye nezinye iimveliso ezivela kwi-cannabis ngexesha lokukhulelwa ngenxa yemingcipheko enokuthi ichaphazele ukukhula komntwana. Nangona ayisiyiyo kwaphela igalelo le-CBD, i-CBD yaziwa ngokuhluza ngesithintelo se-placental.
Ukuba ucinga ukusebenzisa ioyile ye-CBD ukunyanga imeko yempilo enjengentlungu, qiniseka ukuba uthetha nomboneleli wakho wezempilo ukuze uqiniseke ukuba lukhetho olufanelekileyo kuwe.
Ngoku ungafumana iMigangatho ePhakamileyo ngokuseMthethweni kumazwe amaninzi. NguLifehacker
egqithileyongeposi Previous:Abaphandi bakholelwa ukuba i-CBD inokunyanga kwaye ikhusele iCoronovirus.Okulandelayoelilandelayo:Uyisebenzisa kanjani ioyile ye-CBD yentlungu?
Khangela iiBlogs zethu zaMva nje
Iibhloko zethu zakutshanje
Delta 8 THC kunye nokuNcipha
Ingxelo yeArhente yeNyanga yoBukrelekrele yeNyanga 8-30-2021
Ummeli Freak Ububi Ingxelo yenyanga yobukrelekrele 7-25-2021
Ingxelo yeArhente eNgaqhelekanga yeNgxelo yeNgqondo yeVeki ye-6-27-2021
I-Texas iyenza ibe semthethweni i-Delta 8 yeeTHC Iimveliso
Entsha: Amabango okuFunda Amanani amakhulu e-CBD anceda ukunciphisa iRodents Ukunciphisa iMeth Intake